Seal သည် Seo Search Engine Optimization အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြောပြသည်
Buzz အမြောက်အများသည် search engine optimization ကိုဝိုင်းရံထားသည်။ ယနေ့သင်သည်ဤပူပြင်းသည့်ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုသင်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ SEO ဆိုတာဘာလဲ။ SEO ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲ။ SEO ဆိုတာဘာလဲ။ SEO ကိုမည်သူသင်ယူ။ လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။ ဤဆောင်းပါး၌ Semalt Customer Customer Success Manager, Ivan Konovalov, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ကြိုးစားသည်။
လူတစ် ဦး သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် (မည်သည့်ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်မည်သည့်မေးခွန်းမဆို) သော့ချက် (Google, Bing, Yahoo စသည်ဖြင့်) ထည့်သောအခါသူသို့မဟုတ်သူသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်အမျိုးမျိုးရရှိသည်။ ၎င်းသည် SEO (search engine optimization) ကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုအဓိကထားသည်။
ယနေ့အလျင်အမြန်ပြေးနေသောကမ္ဘာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အရာရာကိုဆိုလိုသည်။ သန်းနဲ့ချီတဲ့စာမျက်နှာတွေကမင်းရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားတာသာကောင်းတယ်။ ယုတ္တိရှိပါ။ ရာနှင့်ချီသောစာမျက်နှာများရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုရှာဖွေရန်အချိန်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သူနည်း။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့? ဤသည် SEO ဆိုသည်မှာဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။
SEO အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးသည်အကျိုးအမြတ်မဟုတ်ဘဲသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက်ထုတ်လုပ်သောအော်ဂဲနစ်အသွားအလာဖြစ်သည် (လခမဟုတ်သောသို့မဟုတ်သဘာဝမဟုတ်) ။ ၀ က်ဘ်အသွားအလာကိုတိုးမြှင့်သောအခါသင်၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်မှမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြောင်းလဲခြင်းအပြင်အမြတ်အစွန်းများပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဒါဟာစာသားလူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု၏နည်းစနစ်သည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း (သင်မည်သည့် web-based algorithm ကိုမဆိုသင်စဉ်းစားနိုင်သော်လည်း) အခြေခံများကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏ WordPress ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အံ့ဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပါ။ အခမဲ့ SEO သင်တန်းကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုလျစ်လျူမရှုပါနဲ့ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ကြီးမားသောလိဂ်သို့ဝင်ရောက်ပါကသင်သည် SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက် ငှားရန်တတ်နိုင်သည်။
သင်သိသင့်သော SEO နှင့်သက်ဆိုင်သောဝေါဟာရများ
၁။ White Hat SEO ဆိုသည်မှာ ပရိသတ်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြူရောင် ဦး ထုပ် SEO သည်နောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးရိုးရှင်းဖြစ်၏ ပရိသတ်ကိုမှားယွင်းသောလမ်းဖြင့်မပွတ်သပ်ပါနှင့်၊ သင်၏စာမျက်နှာများကို spam အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလုပ်နေစဉ်သူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းပါ။
(၂) Black Hat SEO - ခင်ဗျားအဲဒါကိုအဖြူရောင် ဦး ထုပ် SEO ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဖြူရောင် ဦး ထုပ်သည်ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သော်လည်းအနက်ရောင် ဦး ထုပ်ကမထားပါ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုခြင်းကဤနည်းစနစ်တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို spam အဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ညံ့ဖျင်းပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကောင်းသောငွေရှာ။ အခြားအရာအားလုံးနှင့်အတူဒုတိယအချက်နှင့်အတူလျင်မြန်စွာအဆင့်ရရှိရန်တ ဦး တည်းကိုကူညီပေးသည်။
၃။ စာမျက်နှာ ပေါ်မှ SEO - သင်၏ရေးသားချက်များတွင်အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် meta tags များ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ URL ဖွဲ့စည်းပုံ၊ alt စာသား (ရုပ်ပုံဖိုင်များအတွက်)၊ အမြန်နှုန်းတင်ခြင်း၊ လင့်များ၊ တင်ထားသောအကြောင်းအရာများ၏အရည်အသွေးနှင့်အခြားများစွာဖြစ်နိုင်သည်။
4. Off-page SEO ဆိုသည်မှာ ဒိုမိန်းအာဏာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ဒိုမိန်း၏သက်တမ်း၊ ကျော်ကြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များစသည်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
SEO နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်ရေးသားချက်များရေးသားခြင်းအတွက်အကြံပြုချက်များမှာ -
သင့်လျော်သော meta ဖော်ပြချက်ကိုသုံးပါ